सायद हेरेपछी संयमसँग केकीको फेसबुक गफ – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१२ मंसिर २०७७, शुक्रबार ०२:५१ English
सायद हेरेपछी संयमसँग केकीको फेसबुक गफ
काठमाण्डौ । सायद हेरिसकेपछी हिरोईन केकी अधिकारीले आफ्नो फेसबुक वालमा लेखिईदिईन ‘ग्रेट वर्क बाई संयम पुरी… लभ्ड सायद.. डन्ट मिस ईट ।’ त्यसपछि उनको स्टाटसमा कमेन्टको बर्षा हुन थाल्यो । जहाँ छोटे हिरो संयमले केकीलाई थ्याङ्क्स पनि दिन भ्याए । सो स्टाटसमा केकीका फ्रेण्डहरूले कमेन्ट गरिरहदा संयम र केकीको गफ पनि स्टाटसमा मज्जाले चलेको देखिन्छ जहाँबाट के पुष्टी हुन्छ भने केकी र संयमको दोस्ती राम्रैसँग जमेको रहेछ । केकीले संयमलाई नामबाटै पुकारे पनि संयमले भने केकीको नाम कहि कतै लेखेका छैनन् । केकीको नाम किन उनले लेखेनन् उनीनै जानुन् तर सोही स्टाटसमा धेरै पटक गरिएको कमेन्टमा सायद हिरोले केकीलाई हिरोईन भनेर मात्र सम्बोधन गरेका छन् । जव संयमले थ्याङ्क्स दिदै पहिलो कमेन्ट गरे त्यसपछि केकीले संयमलाई मुक्तकण्ठले तारिफ गर्दै उनलाई एकदमै राम्रो हिरो भनेकी छिन् । त्यसपछी संयमले फेरी कमेन्ट गर्दै केही रहस्यात्मक तरिकाले लेखेका छन्- ‘हरेक पाईलामा मलाई गाईड गरेकोमा धन्यवाद हिरोईन कन्स्ट्यान्ट सपोर्टका लागि.. मच लभ..।’ त्यसपछी फेरी केकीले आफै कुरा घुमाएर लेखेकी छिन्- ‘सेन्टी बनायो मलाई हिरोले ।’ जसको जवाफमा संयमले केकीलाई केही सुझाव पनि दिएका छन् । उनले सुझाव दिदै लेखेका छन्- ‘सेन्टी नहुनु, कारण सेन्टी मुड भन्दा ज्वली मुडमा तिमी धेरै राम्री देखिन्छौ … टेक केयर ।’
यसपछि पनि उनीहरूको कमेन्ट सम्बाद चलिरहन्छ । जहाँ फेरी केकीले लेखेकी छिन्- ‘तर तिमी युदिन (शायदमा संयमको नाम) हुँदा पनि दामी र संयम हुँदा पनि दामी । मलाई अटोग्राफ चाहियो ।’ यो सम्बादको यात्रा अझै रोकिदैन र संयम फेरी लेख्छन्- ‘यो दिल चोरेर फरार भईसक्यौ अटोग्राफ कसरी दिनु ।’ यो कमेन्टमा संयमले के भनेका छन् ध्यान दिनुस र पढ्नुस फेरी एक पटक । त्यसपछी केकीले के भनिन् होला ? पक्कै हिरोईन न परिन उनले पनि आईएम सरीको एक डाईलग तुरून्तै लेखिदिईन्- ‘हार्ट–टू हार्ट कन्सेक्सन थाहा छैन हिरो ?’
केकी भन्दा कान्छा हिरो संयम रातारात स्टार भएका छन् । जति पनि दर्शक र फिल्ममेकरले उनको पहिलो काम हेरे सवैले उनको अभिनयलाई मुक्तकण्ठले तारिफ गरेका छन् । यति सम्मकी उनी नयाँ पुस्ताको स्टार भएर कहलिसकेका छन् । उनी अभिनित फिल्म ‘सायद’ अहिले राजधानीका सिनेमा हलमा भव्यताका साथ प्रदर्शन भईरहेको छ । (फिल्मीखबर)
१ जेष्ठ २०६९, सोमबार २०:०६ मा प्रकाशित